Akụkọ - Peeji nke 25 nke 29 - DataNumen
Emepụtara Advanced Outlook Data Recovery 1.0 na Ọktọba 21, 2009
Nkwado Outlook 97, 98, 2000, 2002, 2003 na 2007.
Nkwado Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista na Windows 7.
Nkwado iji weghachite ozi mail, nchekwa, posts, nhọpụta, arịrịọ nzute, kọntaktị, ndepụta nkesa, ọrụ, arịrịọ ọrụ, akwụkwọ akụkọ na ndetu. All Njirimara, dị ka isiokwu, ka, si, cc, bcc, ụbọchị, wdg, na-natara.
Nkwado iji weghachite ozi mail na ederede ederede, usoro RTF na HTML.
Nkwado iji weghachite ihe ndị agbakwunyere, dị ka Excel Worksheets, akwụkwọ Okwu, wdg.
Nkwado iji weghachite ihe ehichapụ Outlook, gụnyere ozi ozi, nchekwa, posts, nhọpụta, arịrịọ nzute, kọntaktị, ndepụta nkesa, ọrụ, arịrịọ ọrụ, akwụkwọ akụkọ na ndetu.
Nkwado iji weghachite data Outlook site na draịva ma ọ bụ diski dị ka 16777216 TB (ntụgharị 17179869184 GB).
Nkwado iji weghachite data Outlook na nchekwa okwuntughe, ma compressible encryption na zoro ezo dị elu (ma ọ bụ zoro ezo kacha mma) na-akwado. Enwere ike weghachite data Outlook ọbụlagodi na ịnweghị paswọọdụ.
Nkwado iji wepụta faịlụ PST edoziri na usoro Outlook 97-2002 na usoro Outlook 2003/2007.
Nkwado iji nwetaghachi data Outlook site n'ụdị draịva ma ọ bụ diski ọ bụla, dị ka diski ike, draịva flash, diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado iji nwetaghachi data Outlook site n'ụdị faịlụ faịlụ ọ bụla, dị ka abụba, FAT32, NTFS, Linux Ext2, Linux Ext3, wdg.
Nkwado iji weghachite data Outlook site na mgbasa ozi rụrụ arụ.
DataNumen Outlook Express Repair 2.1 wepụtara na July 7, 2009
Page 25 nke 29«Nke mbụ<Nke gara aga212223242526272829Osote >Ikpeazụ »